RAHARAHA KAOMININA ANTSIRABE : Tsy manan-jo hampiato ny Ben’ny tanàna ny Mpanolotsaina
Nampiantso mpanao gazety tao amin’ny trano fiasany ao amin’ny Lapan’ny tanànan’Antsirabe, ny Ben’ny tanàna Razanakolona Paul, omaly, tokony ho tamin’ny 10 ora sy sasany mikasika ny filazan’ny Mpanolotsaina kaominaly fa “haato amin’ny asany ny Ben’ny tanàna”. Navoitran-dRazanakolona Paul nandritra izany fa “raha araka ny lalàna dia tsy manan-jo hampiato ny Ben’ny tanàna amin’ny asany ny Mpanolotsaina kaominaly fa ny minsiteran’ny Atitany ihany no afaka manao izany”. 1er février 2017
Anisan’ny niteraka olana teo amin’ny fitantananana ny tanàna, tsy ho an’Antsirabe ihany fa ho an’ireo Kaominina sasany ilay lalàna vaovao momba ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny Mpanolotsaina, izay nilaza fa lany ho mpanolotsaina avy hatrany ireo kandida mpifaninana tamin’ny fifidianana.
Ho an’Antsirabe dia manana mpanolotsaina 20 ny Kaominina. Enina amin’ireo ihany anefa no Mpanolotsaina azon’ny Transport Razanakolona, izay nahalany ny ben’ny tanàna amin’izao fotoana izao. Ny ambiny izany dia olona tsy mitovy firehana ara-politika aminy ka na dia tsara sy mety aza no nataony mba hampandrosoana ny tanàna dia mahita hevitra hanenjehana sy hanaratsiana azy hatrany ireo Mpanolotsaina sasany ireo.
Efa nanentana anefa ity Ben’ny tanàna ity fa raha tiana ny hampandroso sy hampivoatra ny tanànan’Antsirabe dia tokony hajanona any an-tranon’ny tsirairay any ny loko politika.Samy nanaiky izany ny rehetra ary samy tsara resaka avokoa saingy manao tari-bato vilam-bava izy ireo ka hafa no notondroin’ny molotra sy ny nataon’ny tanana.
Tim no ao ambadika
Io tarigetran’ny ben’ny tanana io anefa no nahavoafidy azy ho filohan’ny Ben’ny tanàna eto anivon’ny Faritra Vakinakaratra. Mbola nohamafisin- dRazanakolona Paul omaly fa tsy mahatanty ny fampandrosoana ataony amin’ny tanànan’Antsirabe ireo Mpanolotsaina sasany. Anisan’izany, ohatra, ny fahafantaran’izy ireo fa hanamboatra fotodrafitrasa lehibe ny tanora eto Antsirabe mba hahafahan’izy ireo mihanoka amin’ny fanatajantena na dia andro avy orana sy hatsiaka aza. “Complexe sportif” io hajoro eny amin’ny Vatofotsy io ary efa eo am-pelantanana ny vola hananganana izany.
Mametraka ahiahy amin’ny antoko Tim, ho ao ambadik’izao fankahalana izao ny Ben’ny tanàna Razanakolona Paul. Nambarany mantsy fa taorian’ny fivorian’ny Mpanolotsaina sy ny Ben’ny tanàna dia lasa manohy ny fivoriana ao amin’ny biraon’ny Tim indray ireo Mpanolotsaina sasany ireo avy eo. Marihina fa 6 no isan’ny Mpanolotsaina Tim ary iray ny HVM. Ho sarotra, araka izany, fiaraha-miasa eo amin’izy ireo sy ny Ben’ny tanàna. Tsy hihemotra amin’izany ary nilaza ny tsy hiala amin’ny maha Ben’ny tanana azy anefa Razanakolona Paul raha tsy ny vahoaka nifidy azy no mangataka izany.